Mon, Jun 1, 2020 at 4:11am
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको लण्डनमा उपचार हुँदै
काठमाडौं, पुस ६ । नेपालका प्रख्यात न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको बेलायतस्थित लण्डनमा उपचार भैरहेको खबर प्राप्त भएको छ । विशेषगरी न्युरो सर्जरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रसिद्धी कमाएका नेपालका डाक्टर देवकोटा अस्वस्थ्य भएपछि हाल उनी लण्डनमा रहेर उपचार गराइरहेको नेपालस्थित उनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको हो । हाल देवकोटाको लण्डनस्थित एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी गराइएको भएतापनि उनलाई लागेको रोगका बारेमा भने केही बताइएको छैन..
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमालाई प्रोत्साहनस्वरूप पाँच हजार
नवलपरासी, ६ पुस । नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता) पूर्व नवलपुरमा रहेको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमालाई प्रोत्साहन रकम दिन थालेको छ । स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमालाई लक्षित गरी नमूना सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममार्फत जनही रु पाँच हजार प्रोत्साहन भत्ता रकम प्रदान गर्न शुरु गरिएको हो । गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा र नवजात शिशुले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले..
घरेलु पद्धतिबाट सर्पको विष झार्ने नवलपरासीका डम्बरबहादुर थापा
नवलपरासी, ४ पुस । यहाँका एक सामान्य व्यक्ति विषालु सर्पले डसेका बिरामीलाई घरेलु पद्धतिबाट सफल उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) गैँडाकोट–१३ सिखरौली निवासी डम्बरबहादुर थापा सर्पदंशित बिरामीलाई घरेलु उपचार पद्धतिबाट निको पार्दै यहाँ चर्चित बनेका छन् । थापा भारतीय सेनाका पूर्व कर्मचारीसमेत हुन् । विसं २०५४ देखि आफ्नै घरमा सो सेवा दिँदै आएका थापाले हालसम्म सर्पले डसेका करिब..
सरसफाइको महत्वका बारेमा जानकारीले बाल मृत्युदरमा कमी
काठमाडौँ, ४ पुस । आफ्ना शिशुलाई खोप लगाउन खोप केन्द्रमा आउने आमालाई सरसफाइका महत्वका बारेमा जानकारी दिँदा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । शिशुलाई खोप दिइएपछि खोपकेन्द्रमा कम्तीमा पनि त्यस्ता आमा कम्तीमा आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्ममा रहन्छन् । सो समयमा स्तनपानको महत्व, बच्चाको दिशापिसाब विसर्जन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, पानी उमालेर खाँदा हुने फाइदा, शिशुलाई पौष्टिक तत्वको आवश्यकता, हात धुने तरिकालगायत विषयमा जानकारी..
आयुर्वेद अस्पतालमा स्वस्थ्य जीवन कार्यक्रम, अतिरिक्त योग प्रशिक्षण दिइने
तिलोत्तमा, रुपन्देही ४ पुस : लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेद औषधालय बुटवलमा स्वस्थ्य जीवन कार्यक्रम शुरु भएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षणका अतिरिक्त योग प्रशिक्षण दिइने भएको छ । स्वस्थ्य जीवन कार्यक्रम शुभारम्भमा सहभागी रुपन्देही क्षेत्र नं २ प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले अञ्चल आयुर्वेद अस्पताललाई अझ व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले यस क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा दिलाउन..
महोत्तरीमा ११ हजार बालबालिका कुपोषित, पोषण अभियान शुरु
महोत्तरी, ३ पुस । जिल्लामा करिब ११ हजार कुपोषित बालबालिका भेटिएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले पिठो वितरण कार्यको अभियान शुरु गरेको छ । शीघ्र कुपोषणमा परेका बालबालिकालाई पौष्टिक आहारस्वरुप पिठो वितरण गर्ने कार्य शुरु गरिएकाले सो अभियानले यस्ता बच्चालाई सुपोषित बनाउने तयारी गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । बालपोषण शाखाका अधिकृत गिरेन्द्र झाका अनुसार पहिलो चरणमा सदरमुकाम जलेश्वरका विभिन्न स्थानमा पिठो वितरण..
ग्रामिणमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा बढी प्रभावकारी बन्दै
चितवन, पुस २ । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी बनेको हो । जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास कार्यालयकोे तथ्यांक अनुसार जिल्लाभर अहिले ९०२ घर परिवारका ७८ हजार ५३६ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । उनीहरुमध्ये शहरी क्षेत्रका जनता धेरै रहेको..
‘विश्वमा श्वास–प्रश्वास जन्य रोगबाट वर्षेनी साढे ६ लाखको मृत्यु’
जेनेभा, मंसिर २९ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा विश्वमा हरेक वर्ष साढे ६ लाख नागरिकको श्वास–प्रश्वासजन्य रोगबाट ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बिहीबार जेनेभामा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा विश्वमा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि साढे ६ लाख नागरिकको ज्यान जाने गरेको जनाइएको छ । मौसमी इन्फ्लुएन्जाका कारण श्वास–प्रश्वास जन्य रोगको प्रकोप बढ्ने गरेको..
कालीकोटकी चन्द्रा शाहको मृत्युबारे छ बुँदे सहमति
कालीकोट, २८ मंसिर । सुत्केरी अवस्थामा शल्यक्रिया गर्दा अस्पतालका डाक्टरको लापर्बाहीका कारण ज्यान गुमाएकी चन्दा शाहको मृत्युको घटनालाई लिएर कालीकोटमा व्यवसायीको दबाबमा छ बुँदे सहमति भएको छ । कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटमा सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा छबुँदे सहमति भएको हो । कालीकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रे, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाही, जिल्ला अस्पताल कालीकोटका प्रमुख कौशल..
जाडोमा हुने छालाको सुख्खापनाको हेरचाह यसरी गर्नुहोस्
काठमाडौं । मौसममा हुने प्ररिर्वतनले हाम्रो स्वास्थयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । कात्र्तिक महिना सुरु भएसँगै जाडोको मौसम सुरु हुने गर्दछ । जब चिसो मौसम सुरु हुन्छ हामीले आफ्नो शरिरलाई चिसोबाट बचाउनका लागि न्यायो तथा तातो कपडा खरिद गर्ने गर्छाै । तर हामी आफ्नो अनुहार तथा छालाको हेरचाहमा भने खासै ध्यान दिदैनौं । जाडो मौसममा छालाको हेरचाहा गर्नु पर्दछ । यस मौसममा..
म्याग्दीमा १९ करोडको लागतमा ५० शैयाको अस्पताल निर्माण शुरु
म्याग्दी, २७ मंसिर । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा ५० शैया क्षमताको सुविधासम्पन्न अस्पतालको भवन निर्माण कार्य शुरु भएको छ । करिब रु १९ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागिएको बेनी अस्पतालको भवन शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, बागलुङले ठेक्कामार्फत काम शुरु गरेको हो । चार हजार ९६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सो भवन चार तलाको रहनेछ । विसं २०७३ मंसिर २१ गते महादेव..
सिंहदरबार वैद्यखानाले जिएमपी मापदण्डको औषधि उत्पादन गर्ने
काठमाडौँ, २६ मंसिर । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले यसै वर्षबाट जिएमपी मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन गर्ने भएको छ । वैद्यखानाका प्रबन्ध निर्देशक डा वंशदीप शर्मा खरेलले चालु आवको अन्त्यसम्मका कम्तीमा चार उत्पादन जिएमपीअर्थात गुड म्यानुफ्याक्चरीङ प्राक्टिसअनुसार उत्पादन गरिने जानकारी दिए । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित उत्पादन गर्न पहिलो चरणको गृहकार्य सकिएको उनले बताए । प्रबन्ध निर्देशक खरेलले वैद्यखाना नेपालको सबैभन्दा पुरानो आयुर्वेद औषधि..
काठमाडौँ, २२ मंसिर । सीमा राना (नाम परिवर्तन) अहिले २० वर्षकी भइन् । उनी काठमाडौँकै एक कलेजमा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । थापाथलीस्थित प्रसुति गृहमा भेट हुँदा उनी गर्भपतनका लागि आएकी थिइन् । अविवाहित उनले केटा साथीले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न नमानेकाले गर्भ रहेको बताइन् । सीमा मात्र होइन काठमाडौँका विभिन्न क्लिनिकमा दिनहुँ जसो स्कुल-कलेजका किशोरी असुरक्षित सम्बन्धपछि रहेको गर्भ फाल्नका..
बैतडीमा आइरन चक्कीको अभाव, गर्भवती महिलाहरु समस्यामा
बैतडी, २२ मंसिर । बैतडीका स्वास्थ्य संस्थामा केही दिनदेखि आइरन चक्कीको अभाव भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्कीको अभाव हुँदा गर्भवती महिलालाई आइरन चक्की नदिएरै फर्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्वास्थ्य चौकीले जनाएका छन् । सिगास गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको गाँजरी स्वास्थ्य चौकीमा आइरन चक्की कत्ति पनि नरहेको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज जनकसिंह धामीले जानकारी दिए । उनले भने, “सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको आइरन..
'जडिबुटीबाटै सम्भव छ घातक रोगको उपचार' : आयुर्वेद चिकित्सक कृष्णप्रसाद पोखरेल
ललितपुर, १९ मंसिर । काठमाडौंको कलंकी बस्दै आएका ७४ वर्षीय हेमराज गौतम ‘प्रोस्टेटग्लान्ड’ बढ्ने समस्याले निकै पीडित भए । चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी खुर्केर फाल्नुपर्ने सुझाव दिए । चिकित्सकले दुई पटकसम्म शल्यक्रिया गरी खुर्केर पनि फालिदिए । तर निको भएन । फेरि पलायो । चिकित्सकहरुले तेस्रोपटक शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने भन्दै उनको पिसाब थैलीमा झोला झुण्डाइदिए र अब निको नहुने घोषणा पनि गरिदिए..
सोह्र डाक्टरको काम एक्लै भ्याउँदै प्रभु शाह
इलाम, १७ मंसिर । १६ जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पताल इलाममा एकजना मात्र विशेषज्ञ उपलब्ध हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । जिल्ला अस्पताल इलाममा हाल दुईजना स्थायी डाक्टर र दुईजना मेडिकल अफिसरले सेवा दिइरहेका छन् । नौजना विशेषज्ञसहित १६ जना डाक्टरले सेवा पुर्‍याउनुपर्ने ५० शैयाको जिल्ला अस्पतालमा एकजना मात्र विशेषज्ञ डाक्टर प्रभु शाह सेवारत छन् । विशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा अस्पतालमा सेवा लिनआएका बिरामी..
आज ३० औं विश्व एड्स दिवस विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरि मनाईदै
काठमाडौ १५ मंसिर । आज ३० औं विश्व एड्स दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइदैछ । दिवसको यस वर्षको नारा मेरो स्वास्थ्य मेरो अधिकार भन्ने तय गरिएको छ । दिवसका अवसरमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछन् । एचआइभी एडस् सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उदेश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १ तारीखमा विश्वभर यो दिवस मनाउने..
झापामा एचआइभी संक्रमितको संख्या घट्दै, चेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी
झापा, १५ मंसिर । झापामा एचआइभी संक्रमितको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ । जिल्लामा २०७३ मा १६ जना एचआइभी संक्रमित भेटिएका थिए । विसं २०७२ मा ४३ जना एचआइभी संक्रमित फेला परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार गत वर्ष तीन हजार ९९ पुरुष र एक हजार १०५ महिलाको रगत परीक्षण गर्दा आठजना पुरुष र आठजना महिलामा..
आज राष्ट्रिय क्षयरोग दिवस मुलुकभर चेतनामूलक कार्यक्रम गरि मनाइदै
काठमाडौं मंसिर १३ । आज ६४ औं राष्ट्रिय क्षयरोग दिवस मुलुकभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइदै छ । दिवसको यस वर्षको नारा हामी जो कोही पनि क्षयरोग बाट संक्रमीत हुन सक्दछौं तर सबै मिलेर यस बिरुद्ध लड्न सकिनेछ भन्ने तय गरिएको छ । नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक बर्ष मंसिर १३ गतेका दिन राष्ट्रिय क्षयरोग दिवस मनाउने गरिन्छ..
सार्कस्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सकको सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै
काठमाडौँ, ६ मंसिर । जनरल प्राक्टिस तथा इमर्जेन्सी मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सकको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सम्मेलन यही मंसिर ९ र १० गते काठमाडौँमा हुने भएको छ । जनरल प्राक्टिसनर एसोसिएसन अफ नेपाल (जिपान) को संयोजनमा हुने दुईदिने उक्त सम्मेलनमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशका करिब चारसय चिकित्सक सहभागी हुनेछन् । नेपालमा सात वर्षपछि हुन लागेको यो सम्मेलनमा सहभागी देशले विशेषगरी जनरल तथा..
कास्कीमा एक वर्ष भित्रै ५६ हजारले गरे स्वास्थ्य बीमा
पोखरा, ५ मंसिर । कास्कीमा झण्डै एघार महिनाको अवधिमा ५६ हजार ४५० जनाले स्वास्थ्य बीमा दर्ता गराएका छन् । गत पुस १२ गतेदेखि नेपाल सरकार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति कास्कीले बीमा दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेकोमा आजसम्म १२ हजार ३०० परिवार बीमामा आवद्ध भएका छन् । बीमा दर्ता गरेबापत रु तीन करोड ७० लाख संकलन भएको कार्यालयका प्रबन्धक कृष्णप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए..
कन्चनपुरमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि समिति गठन
कञ्चनपुर, ५ मंसिर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन लागि ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसमिति’ गठन गरिएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१ (दोस्रो संशोधन, २०७३) लाई परिमार्जन गरी स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो । स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका संरक्षकमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐर, अध्यक्षमा लालबहादुर..
इलाम, ४ मंसिर । नवजात शिशु र आमाको जीवन सुरक्षाका लागि इलाममा यसै वर्षदेखि पाँचवर्षे नयाँ परियोजना शुरु भएको छ । ‘वन हार्ट वल्ड वाइड’ नामक अमेरिकी संस्थाले पाँचवर्षे परियोजना सञ्चालन गरेको हो । परियोजनाले पहिलो वर्ष स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाको माग बढाउन चेतना विस्तार, व्यवहार परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सेवा प्रदायकको क्षमता विकास र सेवा केन्द्रहरूको गुणस्तर वृद्धिमा काम गर्ने जनाइएको छ..
मुटुरोगको निःशुल्क उपचार प्रभावकारी, नयाँ जीवन पाएपछि बिरामी दङ्ग
काठमाडौं, मसिर १ । ‘जसले मुटुको भल्व फेर्न निःशुल्क गर्नुभयो, उहाँलाई कोटीकोटी धन्यवाद छ, हामीसँग शल्यक्रिया गर्न पैसा थिएन, निःशुल्क नभएको भए यो शल्यक्रिया हुँदैन्थ्यो, उहाँले गर्दा नयाँ जीवन पाइयो ।’ छेउमै बसिरहेकी दिदीले त्यसो भन्दै गर्दा बिरामी खेमकुमारी थामीमगर मलिन देखिन्थिन् । सानैदेखि कमजोर, राम्रै खाना खाए पनि सधँै दुब्ली भइरहने बहिनीलाई के भएको हो भन्ने थाहै नपाइ २९ वर्ष वितेको..
आज विश्व मधुमेह दिवसः महिलालाई मधुमेहबारे सचेत गराउन आवश्यक
काठमाडौँ, २८ कात्तिक : मधुमेहका कारण प्रत्येक १० मध्ये एकजना महिला मधुमेहका बिरामी हुने बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संघका अनुसार संसारभरि १९९ लाख महिला मधुमेहबाट ग्रसित रहेको तथ्यांक छ । प्रत्येक पाँचमध्ये दुईजना महिला प्रजनन उमेर समूहअन्तर्गतका रहेको र मधुमेह महिलामा मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये नवौँ कारण रहेको चिकित्सकको भनाइ छ । तिलगंगा आँखा अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डा रबा थापा मधुमेहले शरीरका..
अब औषधिको मूल्य ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कम हुने
काठमाडौं, २७ कात्तिक : नेपाली जनताले महँगो मूल्यमा औषधि किन्दै आएकामा अब कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा पाउने भएका छन् । सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका औषधालयमार्फत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिशसहित सुझाव पेश गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले हालको औषधिको मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । समितिले झण्डै चार महिनासम्म औषधि..
नेपाल प्रहरी अस्पताल अब सर्वसाधारणका लागि पनि खुला
काठमाडौं, कात्तिक २६ । महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले आइतबार सर्वसाधारणका लागि खुला भएको स्वास्थ्य सेवाको शुभारम्भ गर्दै सविधानले सुनिश्चित गरेको जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरिएकाले प्रहरीले पनि नागरिकका लागि प्रहरी अस्पताल खुला गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सर्वसाधारणका शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुका साथै नागरिकको..
तेह्र जिल्लाका द्वन्द्वपीडितको पुनःस्थापना र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शुरु
जुम्ला, २६ कात्तिक (रासस) : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले यही कात्तिक चौथो साताबाट १३ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित नागरिकका लागि पुनःस्थापना तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शुरु गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठान जुम्लाको प्रस्तावित परियोजनालाई नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, शान्ति कोषको सचिवालय बबरमहल काठमाडौँले स्वीकृत गरेसँगै यो सेवा शुरु हुने भएको हो । सेवा सञ्चालनका लागि कात्तिक २४ गते शान्ति कोष सचिवालयका कार्यकारी..
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण
काठमाडौं, कात्तिक २४ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश शुक्रबार प्रमाणीकरण भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि अब काठमाडौं उपत्यकामा दश बर्षसम्म निजी मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन । यस्तै एउटै विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन..
तपाई कागती नियमित खानुहुन्छ ? थाहा पाउनुस् यसका फाइदा र बेफाइदा
काठमाडौं कार्तिक २३ । कागतीलाई हामी चिया देखि खाना खाजा एवं पानीमै पनि घोलेर खाने गर्दछौं । मानव स्वास्थयको लागि कागती अति नै लाभदायक अम्लिय फल हो । मुख्य रुपमा तौल घटाउनका लागि कागतीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै कागतीमा रहेको अम्लले पाचन प्रणालीलाई मजबूत पार्ने र अनावश्यक विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । यसमा भिटामिन सी उच्च मात्रामा पाइने हुँदा..
Results 1341: You are at page 44 of 45